ကျေနပ်နေ မိမှာပါ.....တကယ်တမ်း က ကျွန်မ အမေ ...မကျွတ်လွတ်ခဲ့ရင်တောင်...သူ့ စိတ် သူ့ အာရုံ က ကျွန်မ ဆီမှာ မရှိသ လို ကျွန်မ ရဲ့ အဖေ ဆီ မှာ မရှိနိုင်တာ ကို လည်း ကျွန်မ က လွဲရင် ဘယ်သူမှ သိနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး.......
ကျွန်မ ရှိသရွေ့ ဘယ်တော့ မှ သေမသွားတဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အမေ ဆိုတာ ခါးသီး မှုတွေ ၊ ဒဏ်ရာတွေ ကူကယ်ရာ မရှိဘဲ. .ဖြတ် သန်း ရတဲ့ အချိန်တွေ ၊ မွန်းကြပ်လာ ရတဲ့ အချိန်တွေ ကို မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အခါကျရင်.....လူခြေတိတ် တဲ့ ညသန်းခေါင် လို အချိန် မျိုး ကျမှ အိပ်ခန်း တံခါးကို လုံအောင် ပိတ်ပြီး......မရှိတော့ တဲ့ ကျွန်မ အမေရဲ့ အမေ နဲ့ တွဲပြီး မြင်ရတဲ့ အမေ့ အ၀တ်အစားတွေ ကို ၀တ်ပြီး အမေ့လို ဆံပင် ပြင်လိုက်တဲ့ အခါ အမေ နဲ့ ချွတ်စွပ်တူ ပါတယ်ဆို တဲ့ ...အမေ့ သမီး မဟုတ်တော့ဘဲ....ကျွန်မ လိုချင် ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ မရ ခဲ့ရတဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ..အမေအဖြစ် ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ.....ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီလေ. ...အဲဒီ လို အသွင်ပြောင်း ပြီးမှ အမေ သိပ် ကြိုက် တဲ့ မှန်တင်ခုံ ရှေ့ မှာထိုင်ပြီး ကျွန်မ လွမ်းမိတဲ့ အမေ့ကို အားပါးတရ ကြည့်ရပါတယ်....ပြီးရင်...တစ်သက်လုံး မျိုသိပ်ခဲ့ရတဲ့ .... အမေ့ကြောင့် မျက်နှာ ငယ်ခဲ့ ရတဲ့ ဘ၀ တွေ နဲ့ အဖေ့ ကို ကြိတ် သနားခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ တွေ ကို ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေး ရင်း ...ရင်ဖွင့် တိုင်တည်.....ပြောပြမိပါတယ်......ငိုကြွေးလို့ ၀ သွားပြီ ဆိုမှ ...လက်တွေ့ ဘ၀ ထဲ က ကျွန်မ အဖြစ်ပြန် လည် ရောက် ရှိလာပါတယ်....
အပြင်မှာ မရှိတော့ တဲ့ အမေ ကို ကျွန်မ အဲဒီလို ပုံစံ မျိုးနဲ့ မတမ်းတ သင့်တာ ကျွန်မ သိပေမယ့် ...သိပ်ပြီး…စိတ်ပင်ပန်း မွန်းကြပ် လာရတဲ့ အခါတိုင်းကို သီးမခံနိုင်တဲ့ အဆုံး ကျွန်မ စိတ် ကို ကျွန်မ လှည့်စား ပြီး ကျွန်မ လိုချင်တဲ့ ကျွန်မ ကို သိပ်ချစ်တဲ့ အမေ အဖြစ် ကျွန်မ နည်း နဲ့ ကျွန်မ ဖန်ဆင်းယူတာ ဖြစ်ပါတယ်....မလုပ်ကောင်းတာ တွေ လုပ်နေမိလို့ ကျွန်မ ကို ဦးနှောက် ကောင်းရဲ့ လား စိတ်မှ မှန်ရဲ့လားလို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့.....အကုန်သိ ပြီး အကုန်ကောင်း ပါတယ်....ကိုယ့် ရဲ့ စိတ်ဖြေသိမ့်ရာ တစ်ခု အနေနဲ့ သာ စိတ်ရူးပေါက်တိုင်း ကျွန်မ လျှောက်လုပ်နေမိတာ ဖြစ်ပါတယ်.. .မနက်ကျ ရင် ပုံမှန် ကျွန်မ ရဲ့ လက်တွေ့ ဘ၀ ထဲ ကို ပြန်ရောက် ပြီး လူတကာရဲ့ အထင်သေးခြင်းခံရတဲ့ ...ကွယ်ရာမှာ အတင်းပြောခြင်း ခံရတဲ့ ...သူတို့ သားသမီးတွေ နဲ့ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ခိုင်း တဲ့ အမေ့ သမီး ဘ၀ ကို ကျွန်မ လက်မခံချင်လည်း ပြန်ရောက်ရအုံးမှာပါ.......
ကျွန်မ တတ်သိ နားလည် တဲ့ အရွယ် မရောက်ခင် ထဲ က ကျွန်မ မျက်စိထဲမှာ အမေ့ ရဲ့ ထူးဆန်း နေတဲ့ အမူအကျင့်တွေ ကို စတင်ပြီး သိမြင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်… ကလေး မို့ မသိ နားမလည် ပေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အသိစိတ်တစ်မျိုး နဲ့ အမေ့ ကို မကြာခဏ ကျွန်မ အကဲ ခတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်….ကျွန်မ အဖေ အလုပ်သွားတဲ့ အခါတိုင်း ၊ ခရီးသွားတဲ့ အခါ တိုင်း သူ့ သူငယ်ချင်း လို့ ကျွန်မ ကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ပုံစံ အမျိုးမျိုးသော ယောကျာ်းတွေ နဲ့ ဟေးလားဝါးလား နဲ့ ဆက်ဆံ …နေ တာ…ကျွန်မ အဖေ မဟုတ်တဲ့ တခြား လူတွေ နဲ့ ပလူး ပလဲ နေနေတာ ကို အဲဒီ အချိန် တွေ ထဲ က ကျွန်မရဲ့ နုနယ်တဲ့ ကလေး အသိစိတ်မှာ ဒါ ပုံမှန် မဟုတ်တာ ကို အာရုံ တစ်မျိူး နဲ့ အလိုလို ခံစားလို့ရနေခဲ့ပါတယ်…..အဲဒီ လူကြီးတွေ အိမ်လာတိုင်း အလှမက်ပြီး အကောင်း အရမ်းကြိုက် တဲ့ ကျွန်မ အမေ …အတွက်… အ၀တ် အစားတွေ ၊ နာရီတွေ ၊ မိတ်ကပ်တွေ ၊ နှုတ်ခမ်းနီ တွေ ..အဖိုးတန် ပိုက်ဆံ အိတ်တွေ ယူလာ သလို…ကျွန်မ အတွက် လည်း ကစားစရာတွေ အရုပ်တွေ တသီကြီး လက်ဆောင်ပေး တတ် ပါသေးတယ်….အဖေ လည်း ချမ်းသာတာ ဘဲ..အမေ လိုချင်တာတွေ အဖေ့ ကို ပူဆာ တိုင်း လည်း မငြီးမငြူ အဖေ ၀ယ်ပေးနေတာ မြင်နေကျမို့….ဘာဖြစ်လို့များ အဖေ မဟုတ်တဲ့ တခြား ယောကျာ်းတွေ ရဲ့ တံစိုး လက်ဆောင်တွေ ကို ဘာကြောင့်များ အမေ မက်မော နေရ တာ လည်း ဆိုတာ ကျွန်မ နားမလည် ခဲ့ပါဘူး…..
ကျွန်မ အဖေ မဟုတ်တဲ့ လူကြီးတွေ လက်ဆောင်ပေးလို့ ခပ်တည်တည် နဲ့ ကျွန်မ ငြင်းလိုက်တိုင်း အမေ က အလကားပေးတဲ့ သူ က ပေးတာတောင် ငြင်းရသေးတယ်…နင့် အဖေ ၀ယ်ပေးရင် တစ်ခါ..အခုတစ်ခါ နှစ်ခါရတာပေါ့တဲ့…ဟင့်အင်း..နှစ်ခါ မရရင်နေပါ… .အဖေ ၀ယ်ပေးတဲ့ အရုပ်လေးတွေ နဲ့ လည်း ကျွန်မ ကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်….အဖေ မရှိတဲ့ အခါတိုင်း အိမ်ကို အဲဒီ လူကြီးတွေ လာတယ် ဆိုတာ အဖေကို ပြန်ပြောပြချင်ပေမယ့် ကလေး စိတ်ထဲ မှာ အလိုလို သိနေတာက အဖေသိရင်..အဖေ အရမ်း စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် ဆိုတာ နဲ့ အမေ နဲ့ အဖေ အကြီးအကျယ် စကားများကြမယ်ဆိုတာ ကို ပါ….ကျွန်မ မပြောပေမယ့် အဖေ က အလိုလို သိနေခဲ့ပါတယ်….အမေ နဲ့ အဲဒီလို လူကြီး တွေ …အိမ်မှာ ရောက်နေတုန်း …ဗြုန်း စားကြီး အဖေ အပြင် က ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး….အမေ့ နဘေးရောက်နေတဲ့ အဲဒီလူကြီး ကို တွေ့တော့ အဖေ့ မျက်နှာ ကြီး နီရဲပြီး နှစ်ယောက်လုံး ကို သတ်မယ် တကဲကဲ..နဲ့ပါ …ကျွန်မ မှာ ကြောက်အားလန့်အား နဲ့ ငိုပြီး ပုန်းနေရပါတယ်…နောက်ဆုံး တော့ အဖေ လည်း အမေ့ ကို မသတ်ခဲ့သလို အဲဒီ လူကြီး ကို လည်း မသတ် လိုက်ပါဘူး….. အားလုံး သွေးအေး သွားတဲ့ အချိန် ကျ မှ အဖေ က ကျွန်မ ကို ဖက်ပြီး ငိုပါတယ်….အမေ နဲ့လည်း စိတ်ဆိုးတုန်း ခဏသာ ရန်ဖြစ်ပေ မယ့် နောက်များ ကျ တော့ ချော့ပြီး စကားတွေ ပြောနေတဲ့ အဖေ့ကို တွေ့ရပါတယ်…နောက်နေ့ မနက် တွေ ကျတော့လည်း ဟန်မပျက် အလုပ် သွားတဲ့ အဖေ့ ကိုတွေ့ရပါတယ်…...
အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းခဲ့ သလို …ဘာမှန်းမသိပေမယ့် ကျွန်မ တို့ သားအဖ ဖက်ပြီး ငိုခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ လည်း မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး…ဘယ်တော့ မှ စိတ်မညစ် တတ်တဲ့ .အမေ က တော့ ဘယ်လောက်ပဲ…အဖေ နဲ့ ရန်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကျွန်မ နဲ့ အဖေ ငိုနေနေ…ဒုန်ရင်း က ဒုန်ရင်းပါဘဲ…အလဲအလှယ် အမျိူးမျိုးသော ယောကျာ်းတွေ နဲ့ ပျော်မြဲ …နေမြဲ. .ပွေရှုပ် နေမြဲပါဘဲ…. အဖေ က သာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ အမေ့ စိတ် နဲ့ နေ့ဘက်ဆို ဟန်မပျက် ရုံးတက်ပြီး လူရိုသေတဲ့ အရာရှိကြီး ဘ၀ ကို ခံယူလိုက် …ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ အချိန်တွေမှာ အရက် နဲ့ အဖော်လုပ် မျက်ရည်တွေ ကျရင်း…အရက် သမားကြီး ဖြစ်မှန်း မသိ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ်….အဖေ က ရုပ်ကျ လို့ အပူသည်ကြီး ဖြစ်နေပေမယ့် အမေ က တော့ ဘယ် လောက် အသက် ကြီးကြီး ရင့်မသွားဘဲ…အလှတွေ ပြင်ပြီး ပိုပို နုနေ ၊ခေတ်ဆန် လှပနေ တဲ့ အမေ ဖြစ်ဘဲ နေပါတယ်….
အဲဒီ လိုနဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ အကြောင်း ကို အကြိမ်ကြိမ် ပုံဖော်ကြည့်ရင်း မသိတတ် နားမလည်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ က နေ ကျွန်မ လည်း အသက်တွေ ကြီးလာပြီး အရွယ်ရောက်ခဲ့ရပါ တယ် …တခါတလေ…ကျွန်မ အဖေ နဲ့ အမေ ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကိုတွေးမိတိုင်း လည်း ချစ်ကြိုက် ယူခဲ့ ရက်နဲ့ ဘာကြောင့်များ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကို နားမလည် နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ….တစ်ရက် ကျွန်မ နဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် ကျွန်မ ချစ်သူ က သူ့အမေ နဲ့ တွေ့ဖူးစေချင်တယ်ဆိုလို့..သူတို့ အိမ်ကို ကျွန်မရောက်ခဲ့ ရပါတယ် …..သာမန် မိသားစုလေး ဖြစ်တဲ့ သူတွေ မို့…ကျွန်မ ချမ်းသာပြီး ဂုဏ်ရှိတဲ့ ကျွန်မ အဖေ ရဲ့ နာမည် နဲ့ အလုပ်အကိုင်ကို ကြားရင် ..ဘယ်လိုမှ…ငြင်းနိုင်မယ် မထင်မိခဲ့တဲ့ ကျွန်မ လူရှေ့သူရှေ့..မှာ သူတို့သား နဲ့ ကျွန်မ အမေ ရဲ့ သွေး နဲ့ လူဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်မ ကို ဘယ်လိုမှ သဘောမတူ နိုင်ကြောင်း နဲ့ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲအုံး ၊ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ သာ ကောင်း ပါ စေ..သဘောတူမယ့်အကြောင်း…နဲ့ ရစရာ မရှိ နှစ်ပြားမတန် အောင် ကျွန်မ မိသားစု အကြောင်း ပြောတာ ကျွန်မ …ခံခဲ့ရပါတယ်….